देउबाको मन्त्रिमण्डलमा को-को बन्दै छन् मन्त्रि ? – Purba Aawaj
देउबाको मन्त्रिमण्डलमा को-को बन्दै छन् मन्त्रि ?
प्रकाशित मिति: मंगलबार, आषाढ २९, २०७८ समय: ९:४३:५५
काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेसँगै विपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले मंगलबार प्रधानमन्त्रीको शपथ लिँदै छन् ।
योसँगै उनको मन्त्रिमण्डलमा गठबन्धनमा समावेश कुन पार्टीका कति जना र को–को मन्त्री बन्दै छन् भन्नेबारे चर्चा सुरु भएको छ। गठबन्धमा सामेल कांग्रेस भन्दा १० सिट कम अर्थात ४९ जना सांसद रहेको नेकपा
माओवादी केन्द्रबाट कति र को–को मन्त्री बन्दै छन् भन्नेबारेको चर्चाले पनि स्थान पाएको छ। सरकारमा आफ्ना तर्फबाट कति र क–कसलाई मन्त्री बनाउने भन्नेबारे छलफल गर्न माओवादीले मंगबालर पेरिसडाँडामा स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको छ।
त्यसलगत्तै मन्त्रीहरुकै सहभागिताबारे छिनोफानो गर्न माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ देउवालाई भेट्न बुढानिलकण्ठ जाँदै छन्। माओवादी स्रोतका अनुसार देउवा सरकारमा यसअघि नेकपा सरकारमा लामो समय मन्त्री भइसकेका
आफ्ना नेताहरुलाई सकेसम्म नपठाउने गरि छलफल सुरु भएको छ। सकेसम्म महिला, दलित, जनजाती र नयाँ अनुहारहरुलाई नयाँ सरकारमा पठाउने गरि छलफल सुरु भएको हो। त्यसमा पम्फा भुसाल, अञ्जना विसंखे, शशि श्रेष्ठ मन्त्री बन्ने सम्भावना छ।
यता क्षमताका हिसाबमा जनार्दन शर्माले फेरि पनि मन्त्री पाउने सम्भावना छ। उनी नेकपा सरकारमा सामेल थिएनन् ।
स्रोतले भन्यो,‘ संख्याबारे देउवासँग सहमति भएपछि मात्रै नाम टुंगो लाग्ला। तर यसपटक हामीले नयाँ अनुहार, समावेशितामा ध्यान दिने छौँ। यसअघि लामो समय मन्त्री भइसकेकालाई मन्त्री नबनाउने योजना छ।’ नेपाल खबर बाट
Last Updated on: July 13th, 2021 at 9:43 am
११४८ पटक हेरिएको